2 Ton Engine Hoist (Manual တွန်းလှည်းကရိန်း)
<div>- မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ အခု ALBUM မှာတော့မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ကြံခိုင်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။</div><div>- အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံး စသည်ဖြင့် အဆင်ပြေရာရွေးချယ်လေ့ လာနိုင်ပါတယ်။</div><div>- ကားဘော်ဒီရုံတွေ ကားစက်ပြင်အလုပ်ရုံတွေ ကားရေဆေးဆီလိုက်လုပ်ငန်းတွေ အလိုင်းမင်းချိန်လုပ်ငန်းတွေ တာယာပြုပြင်တပ်ဆင်လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေ စသည်ဖြင့် အသုံးတည့်နိုင်စေမယ့်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်တင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;</div><div>- အသုံးပြုလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..... တဆင့်ပြန်လည်ဖြန့် ဖြူးလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်...... လိုတဲ့ အခါသတိရနိုင်စေဖို့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။&nbsp;</div><div>- မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အခြားလိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာရရင် မူရင်းစက်ရုံများမှ ဈေးနှုန်နှင့် အရည်အသွေးထိုက်တန်မှန်ကန်စွာဖြင့် မှာယူ တင်သွင်းပေးပါတယ်။&nbsp;</div>
HELI Forklift (CPCD 30 ဒီဇယ်သုံး)
<p>HELI Forklift (CPCD 30 ဒီဇယ်သုံး)&nbsp;</p><p>အမြင့် = 3m</p><p>HELI Forklift လက်ရှိပေါက်ဈေး USD 16000$</p><p>* စက်ရုံရှင်း ပြန်ရောင်းဈေး သိန်း (၁၃၅)</p><p>09-771204661 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။</p>
Panasonic Home Elevator အိမ်သုံး ဓါတ်လှေကား
အထပ်(၅) ထပ် အမြင့်အထိ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး လူ (၄)ယောက်အထိ အဆင်ပြေစွာ စီးနင်းလိုက်ပါနိုင်သည်။ နေရာ အနည်းငယ်ရှိရုံဖြင့် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ဓါတ်လှေကားစီးနင်းနေစဉ် မီးပျက်သွားပါက ဓါတ်လှေကားတွင် Reserve Battery Auto Landing System အပြင် Manual Rescue Device လည်းပါဝင်သောကြောင့် မိမိလိုရာ အထပ်သို့ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ဆင်းသက်နိုင်သည်။ပါဝါမလိုပဲ အိမ်သုံးမီတာ ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင် သည်။သက်ကြီးရွယ်အို များ၊လူမမာများ အကူမပါပဲ သက်သောင့်သက်သာ ဆင်းတက်နိုင်သည်။စီးနင်းသူများအတွက် ၁၀၀% စိတ်ချလုံခြုံမှု ရှိပါသည်။လွယ်ကူစွာ အတက်အဆင်း ပြုနိုင်သောကြောင့် မိသားစုများ ပိုမိုအချိန်ပေးတွေ့ဆုံနုိုင်သည်။ပစ္စည်းများလွယ်ကူစွာ အတင်အချ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နံပါတ်(၁) ရောင်းအားအကောင်းဆုံး မိသားစုအိမ်သုံး ဓါတ်လှေကားအမျိူးအစား တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Safe installation သည်ကျွန်တော်တို့၏ ပထမအခြေခံ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါသည်။ အားပေးကြသောဖောက်သည်များမှလဲ ကျွန်တော်တို့ အသင်းဝင်များ၏ ကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများ အပေါ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ Min Dhama Safe Installation တွင်နောက်ဆုံးပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှု ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ကရိန်းများ၊ ဓာတ်လှေကား ထရပ်ကားများ၊ လူတပ် ဓာတ်လှေကားများ၊ ပြားချပ်ချပ် ထရပ်ကားများစသည်တို့ဖြင့်လဲ တပ်ဆင်ပေးပါသည်။
Min Dhama buildsacomplete range of gantry cranes including single girder, double girder and cantilever styles for indoor or outdoor services. Capacities, spans, and heights are virtually unlimited.
Semi gantry crane has the same features of full gantry crane. This type cranes are suitable solution for the area in which overhead runways are not practical, and also impossible to build double track for crane traveling.
ကရိန်းများကို အများဆုံးတည်ငြိမ်မှု၊ အကောင်းဆုံးသွားလာနိုင်မှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ လွယ်ကူချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်မှုတို့ကို ရရှိအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်Min Dhama ကုမ္ပဏီမှ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်စစ်ဆေးပေးပါသည်။ လေယာဉ်ပြေးသံလမ်းများမှလဲ စစ်တမ်းကောက်ခြင်းများ အဆင့်ဆင့်၊ span နှင့် alignment များကိုလဲ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးပါသည်။
(Girder Box beam ) ကို သက်တမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ခုလုံး 1/800 အများဆုံးဝန်နှင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းအားလုံးတွင်လဲ JIS SS400 လက်မှတ်ပါရှိပြီး ၄င်းသည် ASTM A36 or EN 10025 S275JR နှင့်ညီမျှပါသည်။
Box ginders သံမဏိပြားများကို အင်ဂျင်နီယာ ပညာဖြင့် သေချာစွာ ဆောက်လုပ်ကြသည်။ ၄င်းကို ကွေးခြင်းမှပိုမိုခိုင်ခံ့ရန်နှင့် အစွမ်းသတ္တိတိုးမြှင့်ရန်ဂဟေဆော်ခြင်းဖြစ်သည်။ joint(အဆစ်များအားလုံးကိုလဲ AWS / CMAA စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ကြပြီးနောက် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ် VT/ PT/ MT/ RT/ UT ကို ဂဟေဆော်စစ်ဆေး ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Kleemann အိမ်သုံး ဓာတ်လှေခါး (Home Lift)
Kleemann Brand FlexyLift (အဆောက်အအုံသုံးဓာတ်လှေခါး)